ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခ : ယူကရိန်းနိုင်ငံက အီးယူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့် မေးခွန်း ဒုတိယပိုင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ် - Xinhua News Agency
Donetsk ရှိ Anadolကျေးရွာတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ လက်ခံရယူနေသော ဒေသခံများအား မတ် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံကြား ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ယူကရိန်းနိုင်ငံ သမ္မတ ဗိုလိုဒီမာ ဇယ်လန်းစကီးသည် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးအတွက် ယူကရိန်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဆင့်အတွက် မေးခွန်းဒုတိယပိုင်းကို ဥရောပကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ Ursula von der Leyen အား ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဇယ်လန်းစကီး၏ ပြန်ကြားရေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ စာချုပ်စာတမ်းအား ယူကရိန်းနိုင်ငံနှင့် အီးယူ ခေါင်းဆောင်များကြား အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးအတွင်း လွှဲပြောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးက တယ်လီဂရမ်၌ ပြောခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအတွင်း ဇယ်လန်းစကီးက ယူကရိန်းအား အီးယူအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးတည်သော လမ်းကြောင်း၌ “ရှင်းလင်းသော ပံ့ပိုးမှု” ပေးအပ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း von der Leyen အား ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ ၇၇ နှစ်မြောက် မဟာမျိုးချစ်အောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို မေ ၉ ရက်က မော်စကိုမြို့အလယ်ပိုင်း၊ ရင်ပြင်နီ၌ ခမ်းနားသော စစ်ရေးပြအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်က နှစ်ပတ်လည်ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား၌ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် “နာဇီဝါဒကိုချေမှုန်းပစ်ခဲ့တာရယ် ၊ ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် ကျူးကျော်ရန်စမှုတွေ နှိမ်နင်းခဲ့တာရယ်ကို နောင်လာနောက်သားတွေ အမြဲအမှတ်ရနေဖို့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရမဲ့တာဝန်ရှိပါတယ် ၊ ဒီလို ကြောက်မက်ဖွယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲတွေ နောက်ထပ်တစ်ဖန် ထပ်မံမပေါ်ပေါက်လာဖို့ တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်လုပ်သွားရမှာပါ ” ဟု ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် တန်တူညီမျှပြီး သီးခြားလွတ်လပ်သော လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက် အလွန်အရေးပါသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Denys Shmyhal နှင့် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော ဥရောပကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Charles Michel တို့သည် ယူကရိန်း၏ စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းရေး အဆင့်များကို မေ ၉ ရက်က ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အစိုးရ သတင်းပြန်ကြားရေးက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ပင်လယ်နက်မှတစ်ဆင့် ကုန်စည်များတင်ပို့ခြင်းအား ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှစ၍ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Odessa ဆိပ်ကမ်းမြို့၌ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း Shmyhal က ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် သင်္ဘော ၇၀စင်း ခန့်မှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိ Odessa ဆိပ်ကမ်း ၁၀ ခု အပါအဝင် ဆိပ်ကမ်းများ၌ ပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်း Shmyhal က ဆိုသည်။
“သင်္ဘောအများစုမှာ သင်္ဘောကြီးများနှင့် ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက၊ အာရှနဲ့ ဥရောပကို ပေးပို့ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် သန်း ၉၀ ခန့်ဟာလည်း ပိတ်မိနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ သမ္မတ ဗိုလိုဒီမာ ဇယ်လန်းစကီးက ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအတွင်း ၎င်း၏ နိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ရေးပံ့ပိုးမှုပေးရန် ဆွီဒင်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Magdalena Andersson နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးကြသည့် အခြားခေါင်းစဉ်များမှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံကြား စွမ်းအင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ အားကောင်းရေးတို့ဖြစ်ကြောင်း ဇယ်လန်းစကီး ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
Andersson ကလည်း ဇယ်လန်းစကီးနှင့် တယ်လီဖုန်းပြောဆိုစဉ် ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုအတွက် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တွစ်တာပေါ်၌ ရေးသားထားသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Olaf Scholz နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတ အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန်တို့ မေ ၉ ရက်က ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် နောက်ထပ် ငွေကြေးနှင့် စစ်ရေးပံ့ပိုးကူညီမှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ဥရောပ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အတူတကွ ပြုမူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုကို အခြားသောနိုင်ငံများထံ ပြန့်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း Scholz က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
မက်ခရွန်ကလည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချက်ချင်းရပ်စဲရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး လာမည့်ရက်များ၌ ရုရှားအား ဆန့်ကျင်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအရ ဥရောပအဆင့်၌ အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Facts about Russia-Ukraine conflict: Ukraine hands over 2nd part of EU membership questionnaire
BEIJING, May 10 (Xinhua) — The following are the latest developments regarding the conflict between Russia and Ukraine:
Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday submitted the second part of the questionnaire for Ukraine’s candidate status ofaEuropean Union (EU) membership to European Commission President Ursula von der Leyen, said Zelensky’s press service.
During the meeting, Zelensky thanked von der Leyen for the “clear signals of support” for Ukraine on its path towards the EU membership.
Russia heldagrand military parade in central Moscow’s Red Square on Monday to commemorate the 77th anniversary of the Soviet Union’s victory in the Great Patriotic War.
In an address to troops and guests ahead of the annual event, Russian President Vladimir Putin said, “it is our duty to keep the memory of those who crushed Nazism and bequeathed vigilance to us, and do everything so that the horror ofaglobal war does not happen again.”
Russia has always advocated for creatingasystem of equal and indivisible security,asystem that is vital for the entire world community, he said.
Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal and visiting European Council President Charles Michel on Monday discussed steps to solve the issues concerning Ukraine’s agricultural exports, the government press service reported.
During the talks in Ukraine’s southern port city of Odessa, Shmyhal said that the shipping of goods through the Ukrainian ports via the Black Sea was suspended since Feb. 24 due to the Russia-Ukraine conflict.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Monday he had discussed defense support for his country amid the conflict with Russia with Swedish Prime Minister Magdalena Andersson.
German Chancellor Olaf Scholz on Monday held talks with visiting French President Emmanuel Macron, vowing to provide further financial and military support for Ukraine.
Macron called for an immediate cease-fire in Ukraine and noted that important decisions would be made at the European level in terms of sanctions against Russia in the coming days. Enditem
Photo : Local residents receive humanitarian aid in the village of Anadol in Donetsk, on March 10, 2022. (Photo by Victor/Xinhua)